लाजनारायण - व्यंग्य - प्रकाशितः फाल्गुन १४, २०७५ - नेपाल
खास कुरा के हो भने त्यो कलेजका सञ्चालकबीच लफडा रहेछ, त्यहाँभित्र ठूलो भ्रष्टाचार रहेछ । मेरोमा सो कुरा आएपछि सञ्चालकबीचको झगडा समाप्त होस् र भ्रष्टाचार निमिट्यान्न होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले त्यो रकम समातेको थिएँ । अझ भनौँ, म जीवनभरि वकालत गरेको मान्छे, झगडिया आएर 'रिक्वेस्ट' गरेपछि मैले नाइँ भन्न सकिनँ । त्यो घुस थिएन, मध्यस्थता शुल्क थियो । जहाँसम्म काम नगरिदिएपछि पैसा फिर्ता नगरेको कुरा छ, यो त स्याललाई मासु पैँचो दिएर फिर्ता गरेन भनेजस्तो फट्याइँ मात्र हो । पैसा फिर्ता गरेको भए म उनीहरुको नजरमा डरपोक, नालायक ठहरिन्थेँ ।
मैले त्यति सम्मानित पदबाट राजीखुसीले राजीनामै दिइसकेँ । अब मलाई थप कारबाही गर्ने प्रश्न आउँदैन । तर सुन्दैछु, कानुन तानतुन गरेर कारबाही गर्ने कुरा । यो कुरा सुनेर म ओछ्यान नै परिसकेँ । डिप्रेसनमा गइसकेँ । अब मलाई मुद्दा हाल्ने काम गर्नु बेकार छ । घुस लिएको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने मैले अदालतले कुनै जरिवाना तोक्यो भने कसरी तिर्न सक्छु ? अनि जेल जाने कुरा आयो भने त हर्टअट्याक भएर तुरुन्तै ढलिहाल्छु । त्यसैले मलाई बाँकी जीवन शान्तिपूर्ण रुपमा व्यतीत गर्ने अवसर दिइयोस् । बरु म आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति छोराछोरी-पत्नीको नाममा समर्पित गरेर कुनै आश्रमतिर जान्छु, अग्रजहरु गएको बाटो जान्छु । दिगम्बरजीलाई जस्तो मलाई कुनै पदमा नियुक्ति गर्ने चेष्टा सरकारले नगरोस् । यदि गर्छ भने भगवान् कसम ! म एकदमै इमानदारीसाथ काम गर्नेछु । कसैलाई कुनै भिडियो खिच्ने मौका दिने छैन । आगे सरकारको जो दया !
प्रकाशित: फाल्गुन १४, २०७५